Supply-cheni masosi anoti Apple's VR/AR headset inogona kutumira zhizha rino
Apple iri kuuya yakavhenganiswa chaiyo headset Yakafamba kupfuura prototype nhanho uye inogona kutumira kutanga kwaNyamavhuvhu kana Gunyana gore rino, mushumo mutsva unodaro.
A Digitimes chinyorwa inotaura izvozvo apuro yakaita "yechipiri-chikamu cheinjiniya kusimbiswa uye kuyedzwa (EVT 2)" yehedhiseti.
Mugwagwa weApple wekugadzira unotanga neprototyping usati waenderera kune yekutanga kutenderera kweinjiniya yekusimbisa bvunzo (EVT).
Neshumo inotaura kuti mahedhifoni atove muchikamu chechipiri cheEVT, tinoziva kuti kazhinji nhanho dzinotevera dhizaini yekusimbisa inoteverwa nekusimbiswa kwekugadzira, uye pakupedzisira mukugadzirwa kwakawanda.
Pakavepo makuhwa asingaperi nezve Apple's AR/VR musoro mumakore mashoma apfuura, yaifungidzirwa pakutanga kuva kutumira mu2020 asi inofungidzirwa kuti yakatarisana nekunonoka kwakawanda kubva ipapo.
Takanzwa multiple reports kubva masosi akavimbika gore rapfuura zvichiratidza kuti headset yakanangana nekutanga kwa2022, uye zvino zvinoita sezvingangoita.
Chirevo cheDigitimes chinodudza zvikamu zvekutengesa cheni, uye kunyangwe masosi aya achiwanzova neruzivo rwezvirongwa zveApple, kazhinji havawane kuona mufananidzo uzere.
Nguva icharatidza kana ichiratidza kuti ndeyechokwadi, asi parizvino, zvinoita sekunge hatichave nenguva yekumirira.
Windows Mixed Reality haisi kushanda
Nzira yekuvhura nekushandisa Windows Yakavhenganiswa Ichokwadi Tochi
Ongorora: Sony PS5 Pulse 3D Wireless Headset ine ruzha rwakanaka asi yakaipa mi
Iyi Corsair HS60 Pro PC headset inogona kunge ichidhura